မော်တော်ယာဉ်ပေါ့ပါး applications များပစ္စည်း
အပူဂီယာစနစ်က applications များပစ္စည်း
နယူးစွမ်းအင် applications များပစ္စည်း
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အီလက်ထရောနစ် applications များပစ္စည်း
ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု - ဘက်ထရီ
၂။ အလူမီနီယမ်ပလပ်စတစ်ဖလင်တီထွင်မှု၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်များစွာသောအအေးပုံသဏ္producedာန်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး 8021 သတ္တုစပ်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုနားလည်သည်။
3. အလူမီနီယမ် - ပလတ်စတစ်ရုပ်ရှင်ထုတ်ကုန်များသည်ထုတ်ကုန်အသစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ပြီး၊ ဂျာမန်နှင့်ဆလိုဗေးနီးယားလိပ်များ၊ ဂျပန်မှတင်သွင်းသောကြိတ်ဘီးများနှင့်တောင်ကိုရီးယားမှတင်သွင်းသောတွင်းပေါက်များကိုစမ်းသပ်ခြင်းများဖြစ်သည်။
ကုန်ကြမ်း - အရည်ပျော် - သွန်း - စက် - တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း -
အပူအအေး - အအေး - ဆေးကြောခြင်း - သန့်ရှင်းရေး - သတ္တုပါးသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း - ဖြတ်ခြင်း - ဆေးကြောခြင်း - ထုပ်ပိုးခြင်း
8021 လူမီနီယံသတ္တုပါးသည်ဘက်ထရီတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်ခိုင်မာသောအစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းစွမ်းရည်ရှိသည်။ 8021 လူမီနီယမ်သတ္တုပါးသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးအနံ့မရှိပါ။ 8021 အလူမီနီယံသတ္တုစပ်သတ္တုစပ်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ကော်ပြီးနောက်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းအဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ Alloy 8021 ကို client ၏လိုအပ်ချက်များအရတိုင်းတာမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်နိုင်သည်။
8021 Aluminum Foil Features: ၈၀၂၁ လူမီနီယမ်သတ္တုပါးသည်စျေးသိပ်မကြီးသော၊ ကြာရှည်ခံ၊ အဆိပ်မရှိသည့်အပြင် greaseproof ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုများကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ပြီးလျှပ်စစ်နှင့်သံလိုက်မဟုတ်သောအကာအကွယ်များကိုပေးသည်။ အေးခဲနေသောသတ္တုပါးသည်အငွေ့နှင့်အောက်ဆီဂျင်ကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအနံ့အတားအဆီးကောင်းမွန်သည်။ 8021 အလူမီနီယမ်အလွိုင်းသည်ဆေးဝါးဆိုင်ရာထုပ်ပိုးမှု၊ အီလက်ထရွန်နစ်ထုပ်ပိုးမှု၊ ဘက်ထရီအခွံနှင့်အတားအဆီးများလိုအပ်သောအသုံးချမှုများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေသည်။
Battery Pack သတ္တုပြား 8021 သည်သန့်စင်ပြီးအလူမီနီယမ်အခြေခံသတ္တုပြားများဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအပိုပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ များသောအားဖြင့် ၀.၀၃၅ မှ ၀.၀၆ မီလီမီတာအကြား၊ ၈၀၂၁ လူမီနီယံသတ္တုပါးသည်အကျယ်နှင့်အားသာချက်များစွာဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။
8021 အလူမီနီယံသတ္တုပါး၏အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောယာယီအပူချိန် H14, H18, H22, H24 နှင့် O. Mill တို့ပါဝင်သောအလူမီနီယမ်သတ္တုပြားသည်ဘက်ထရီအခွံကဲ့သို့သတ္တုပြားများဖြစ်ပြီးဆေးဝါးသတ္တုပါးများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှရရှိနိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု: အပူဂီယာစနစ်က applications များပစ္စည်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဌာနအရောင်းမန်နေဂျာ Bella Wang